Wasiir Beyle “20 Shirkood oo waa wayn ayaa diiday bixinta Canshuurta” – Kalfadhi
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in 20 Shirkood oo waa wayn ay diideyn bixinta Canshuurta ay dowladda uga baahan tahay kadib Shir jaraa’id uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho.
Wasiir Beyle ayaa sheegay inuu dhowr jeer la kulmay madaxda Shirkadaha diidan bixinta Canshuurta ayna kawada hadleen sidii loo bixin lahaa lacagta Canshuurta balse ay diideyn in ay bixiyaan Lacagta looga baahan yahay .
“20 Shirkood oo waa wayn ayaa diidan bixinta Canshuurta, dhowr jeer waan wada fariisanay mana lagu guulaysan” ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku jirto soo kabasho xoog leh oo dhinaca dhaqaalaha ah rajo waynna ay ka qabaan in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay. Ganacsatada ayuu ka dalbaday in ay ka qayb qaataan sidii loo cafin lahaa deymaha Soomaaliya lagu leeyahay si ay u gaarto isku filnaan dhaqaale.
“Ganacsatada Soomaaliyeed waan ku amaanayaa garab istaaga dowladooda, waxaana ka codsanayaa in ay ka qayb-qaataan sidii loo gaari lahaa soo kabasho iyo isku filnaan” ayuu yiri Wasiir Beyle.
“Waan rajeynayaa in aan heli doono taageerada Ganacsatada, waxaan u sheegayaa in dalka dowlad ayaa ka jirta waa in loo hogaan samaa amarkeeda” ayuu hadalkiisa raaciyay Wasiir Beyle.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku cel celisay in ay sameeyeen kor u kac dhaqaale waxayna ganacsatada ku amaaneen bixinta Canshuurta 2dii sano ee ugu dambeysay. Waa markii ugu horreysay oo Wasaaradda Maaliyadda sheegto in 20 Shirkadood oo waa wayn ay diideyn bixinta Canshuurta Qaranka.
Waxaa jirta tabashooyin badan oo ay qabaan Ganacsatada Soomaaliyeed qaarkood oo ku aadan ammaankooda iyo shuruuc dalka lagu soo rogay oo dhinaca Canshuuraha ah. Dowladda Soomaaliya ayaa isku dayeeysa in ay Ganacsatada ku qanciso ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka.
Xildhibaan Cabdisalaan “MD Lafta-Gareen kuma balamin Xilka uu ii magacaabay, mana ogolaan karo”
Xildhibaan Cabdisalaan "MD Lafta-Gareen kuma balamin Xilka uu ii magacaabay, mana ogolaan karo"